कर्मचारीकै भरमा छाडिदिने हो भने नेपालमा संघीयता घातक हुने देखियो :पीताम्बर शर्मा - TV Annapurna
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं भूगोलविद् पीताम्बर शर्मा नेपालमा संघीय नेपालका परिकल्पनाकार पनि हुनुहुन्छ । विगतमा संघीयताविरोधी स्वरहरू उठिरहँदा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले मुलुक संघीयतामा जान उचित छ भन्दै भन्ने तार्किक बहसमा सक्रिय शर्मा अहिले नेपालको संघीय व्यस्था कतै असफल हुने त होईन भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ । नेपालमा संघीयताको भविष्य र सफलताका सुत्र के हुन सक्छन भनेर टिभी अन्नपूर्णकर्मी शर्मिला सुबेदीले गरेको कुराकानी ।
संघीय व्यवस्था हाम्रा लागि नयाँ अभ्यास हो। यसको बलियो कार्यान्वयनको कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
विज्ञका हिसाबले तपाईंले संघीयता कार्यान्वयन अघि बढाउने कुरामा यतिबेला देखेका कमजोरी के-के हुन् ?
स्थानीय तह बनेदेखि नै चरणबद्ध संक्रमणको योजना हामीले बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो। कस्तो कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? कर्मचारीको क्षमता कसरी बढाउने, पद्धति कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा एक हिसाबले अगाडि बढ्थे। त्यसअनुसार चरणबद्ध योजना बनाउन सकेनौं। त्यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका दलले खेल्नुपथ्र्यो। उनीहरू चुप लागेर बसिदिए। कर्मचारीतन्त्र दिशाहीन भइदियो। दिशा देखाउने काम त राजनीतिक दलहरूले गर्नुपथ्र्यो। कर्मचारीले त जे जानेका छन् त्यही गर्ने हो।प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी कोप्रति जवाफदेही हुने ? स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र सरकारप्रति भन्नेबारे द्विविधा देखिएको छ। कर्मचारीतन्त्रले सबै काम गर्न सक्दैनन्, त्यो त सबल नेतृत्वले गर्ने हो। संघीयता कार्यान्वयनमा दलबीच सहमति हुनुपर्ने हो तर यो पक्ष कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा परेन। यस्तो समस्या चुनावअघि पनि देखिएको हो।
नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू आन्दोलन र विद्रोह गर्नचाहिँ सक्ने तर राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न चुकेको नियति दोहोरिने जोखिम छ ?
राजनीतिक दल र नेताहरूले संघीयतालाई बुझ्ने कोसिस गरेनन । यसको राजनीतिक र प्रशासनिक मर्म के हो ? कर्मचारीतन्त्र र विकास योजनाका सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने ? संघीयताको अभ्यासमा समृद्धिलाई कसरी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ? यस्तो बुझाइको अभाव देखियो। दलबाट जस्तो सोचको अपेक्षा गरिएको थियो, अहिलेसम्म यसमा आशावादी हुने ठाउँ छैन। भविष्यमा पनि दल र नेतृत्वप्रति आशावादी हुने ठाउँ कम छ।समृद्धिका नाराले मात्र हुँदैन, समृद्धि भनेको के हो ? समृद्धि कसका लागि हो ? हामीले अहिले भनेको विकास पहिला भनेको विकासभन्दा कति फरक हो ? त्यसको सैद्धान्तिक आधार के हो ? कुन बाटोमा अगाडि बढ्ने ? विगतको जस्तो रामशरण महतकै आर्थिक नीतिलाई अनुसरण गरेर जाने हो कि ? नयाँ प्रकारको समाजवादी बाटो अपनाउने हो कि ? समाजवादी बाटो भनेकै के हो ? त्यसमा सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका के के हुने ? तिनका भूमिकालाई कसरी समायोजन गरेर लिएर जाने ? त्यसका लागि सरकारसँग कस्तो कुशलता चाहिन्छ ? यस्ता विषयमा सोच्नुपर्‍यो नि ! अहिलेसम्म यस्तो सोचाइको नितान्त अभाव देखिएको छ। नेताहरूले भाषणमा अमूर्त समृद्धिको कुरा गरेका छन्। कोहीले ‘ठुल्ठूला ४÷५ विकास आयोजना आए त्यही हो समृद्धि’ भनेका छन्। ती विकास योजनाले कसलाई के दिन्छ ? ठूलो आशा गरेर भोट दिएका गरिब जनतालाई के दिन्छ ? पत्रपत्रिका पढेर यसबारे नेताहरूले केही बोलेका छन् कि भनेर हेर्छु, त्यस्तो केही देखिँदैन।
यसको अर्थ तपाईको बुझाईमा संघीयतामा जटिलता आउन थालिसकेको हो ?